EU: Ururada Warbaahinta Caalamka iyo Google oo heshiiyay
Home Somali News EU: Ururada Warbaahinta Caalamka iyo Google oo heshiiyay
Wargaysyada Yurub ayaa la daalaadhacayay in ay la qabsadaan internetka, iyaga oo ku waayay akhristeyaal iyo dakhli uga soo xaroon lahaa xayaysiimaha, qaar badanina waxa ay aaminsanyihiin in shirkadda Googal ay ka qaybqaaadanayso arrintraasi.
Hadda shirkadda wax laga baarto ee Google waxa ay qiratay in ay ku khaldantahay sida ay ula dhaqanto warbaahinta waxa ayna heshiis kula gashay in ay iskaashi cusub yeeshaan.
In ku dhaw boqol iyo toban milyan oo pound ayayna ku maalgalindoonaan mashaariic cusub oo warbaahinta loogu adeegsanayo Oline-ka, waxa ayna balanqaadeen in ay la tashan doonaan ururada wargaysyada si ay lacag badan ugu helaan wax soo saarkooda.
Talaabadan waxaa loo arkaa in ay tahay iskuday lagu hagaajinayo sawirka shirkadda Google kaddib markii Midawga Yurub uu ku eedeeyay in Google ay si xun u adeegsanayso suuqa balaaran ee ay haysato.
Wargaysyada The Gurgian iyo the Financial Times ayaa ka mid ah ah wargaysyada ka qayb qaadanaya wadahadalkaasi, balse labadooduba waxa ay sheegeen in heshiiskaasi uusan hirgalaynin inta ay Google ka badalayso shuruucdeeda.
Somaliland: DP World to Start managing Berbera Port in March
Somaliland: Maxaad Ka Taqaan Qaabka Xildhibaanadda Golaha Wakiiladdu U Maraan Ansixinta Wasiiradda Cusub, Mase Aamini Kartaa In Wasiir Walba Gaarkiisa Loola Heshiiyo Oo Laga Qaado Xadi Lacag Ah
Somaliland: A Country Bullied out of its UN Membership
Somalia: Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb-galaya shir looga hadli doono arrimaha Qaxootiga oo ka furmaya dalka Uganda